စစ်ပွဲများအတွက် အစ္စလာမ့်ကျင့်ဝတ် နီတိ War Ethics in Islam | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒီကနေ့ မျိုးချစ်ရခိုင်တွေနဲ့…မျိုးချစ် ဗမာတွေ နိုင်ငံခြားက ကျူးကျော်အခြေချလာသူဆိုရင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ် ခရစ်စယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် ကုလားဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ လက်မခံပါဘူးလို့ ကြေငြာရဲသလား?
ဘာပြောတယ်….IS ကို ရှုံ့ချပွဲလေး? အမျိုးဘာသာ သာသနာဆိုပြီးမောင်ရင်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘဲ ဗလီဖျက် အိမ်ဖျက် မီးရှို့ လုယက် လူသတ်နေကြတာတွေက မြန်မာပြည်မှာ လက်တွေ့ ဖြစ်နေတာတွေ »
စစ်ပွဲများအတွက် အစ္စလာမ့်ကျင့်ဝတ် နီတိ War Ethics in Islam
Ko Myo September 14, 2014 ·
-စစ်ပွဲများအတွက် အစ္စလာမ့်ကျင့်ဝတ် နီတိ
-Prisoners of War(POW)
မည်သူ့ကိုမျှ မီးနှင့်နှိပ်စက်ခြင်း၊ အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ခြင်း မပြုရ။
Wounded soldiers who are neither unfit to fight, nor actually fighting,
should not be attacked.
တိုက်ခိုက်နေခြင်းမရှိတော့သော ဒါဏ်ရာရစစ်သည်တော်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုရ။
စစ်သုံ့ပမ်းများ ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုရ။
လက်ရဖမ်းမိသူ၊ ကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ထားခြင်းခံရသူကို သတ်ဖြတ်ခြင်းအား
တမန်တော်တွေProphets ကို ထာဝရဘုရားသခင်က စေလွှတ်တယ်လို့
ဂျူး၊ ခရစ်ယာန် နဲ့ အစ္စလာမ်တို့က လက်ခံယုံကြည်ထားကြတယ်။
Divine Theories တွေကို တိုက်ရိုက်နားမလည်ခဲ့လျင်
အလ္လာအရှင်မြတ်ရဲ့ စေတမန်တော် မုဟမ္မဒ် (peace be upon Him) ရဲ့
ကုရ်အာန်ကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရှင်းပြပေးတဲ့ Definitions များပါ။
တမန်တော်မြတ်ကြီး မုဟမ္မဒ်(p.b.H) ဟာ
ပြောဆို ပြုမူခဲ့ခြင်းများ အလျင်းမရှိခဲ့လေတော့
ကုရ်အာန်ပြီးလျင် ဒုယမ္မိ အရေးအကြီးဆုံး ပြဌာန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ကို ဒုက္ခမျိုးစုံအား ကြံ့ကြံ့ခံလျက် ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့
ပထမ ၁၄ နှစ်ခန့်အထိ
“ခန္တိစ သည်းခံတရား” လက်ကိုင်ထားလျက်နဲ့သာ
ဇာတိ ရပ်ရွာသာမက ပိုင်ဆိုင်သမျှစွန့်လွှတ်ကာ
မဒီနာမြို့သို့ တရပ်တကျေး ပြောင်းရွှေ့ပါသော်လည်း
ငွေအား လူအား အဆမတန်သာလွန်ကြသော
မိမိမျိုးနွယ်တူ အာရဗ် အရင်းအချာများက
စစ်ပွဲများကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ဆင်နွှဲကြလေရာ၊
မိမိတို့ အဖိနှိပ်ခံ လူနည်းစုတို့အတွက်
“တရားသောစစ်ပွဲ” များ ဆင်နွှဲရလေတော့သည်။
“Permission to fight is granted to those against whom war is made, because they have been wronged, and God indeed has the power to help them. They are those who have been driven out of their homes unjustly only because they affirmed: Our Lord is God” (22:39–40).
ထို့အတွက် စစ်မက်ပြုလာသူတို့အား ခုခံတိုက်ခိုက်ရန် အခွင့်ပြုလေသည်။
ငါ အလ္လာအရှင်သည် ထိုသူတို့ကို ကူညီနိုင်စွမ်းရှိပေသည်။
သူတို့သည် (အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ်ဝယ်) ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်သောကြောင့်
သူတို့၏ အိုးအိမ်များမှ တရားမဲ့ မောင်းထုတ်ခံကြရလေသည်။
မိမိ “တပ်မတော်သားများ” လိုက်နာရမည့် “စစ်ဥပဒေများ” ကိုလည်း
ပြဌာန်းကျင့်သုံးခဲ့သော အောက်ပါ ဥပဒေအချို့နှင့်
ယခု “ဂျီဟားဒ်” ဟုအော်ကာ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြသော
ဂျီဟားဒ် စစ်စစ်ကို ဆင်နွှဲနေခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကို
-War Ethics in Islam
Residential areas should not be pillaged, plundered or destroyed,
nor should the Muslims touch the property of anyone
except those who are fighting against them.
အရပ်သား လူနေ အိမ်ခြေ ရပ်ရွာများကို လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုရ၊
တပါးသူတို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကို ထိကိုင်ခြင်းမျှတောင် မပြုရ။
Muslims must not take anything from the general public of
the conquered country without paying for it.
အခ တန်ဖိုးမပေးပဲ မည်သည့်အရာကိုမျှ ယူဆောင်ခြင်း မပြုရ။
ရန်သူ၏ အလောင်းများကို သိက္ခာမဲ့စေသော
မခန့်လေးစား မဖွယ်မရာအလုပ်များ မပြုမူရ။
ပဍိညာဉ် များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း မပြုရ။
“ဆောင်ရန်” ကျင့်ဝတ်များလည်း များစွာရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါနဲ့ သတိရလို့ မေးပါရစေဦးဗျာ။
ဒီစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်နေကြတယ်လို့ အော်နေကြတယ်။
အစ္စရေး စစ်တပ်နှင့်တကွ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံများမှစစ်တပ်များ၊
ကဲ နီးနီးနားနားပဲ မေးပါရစေ။
၈၈ မျိုးဆက်များ နှင့်
ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသူ တိုင်းရင်းသားများခင်ဗျား။
လူကြီးမင်းတို့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးအကြောင်းကို အသိဆုံးပါ။
ကျနော်တို့ မွတ်စ်လင်မ် ပီသသူတွေကတော့
ISIS ဆိုတဲ့ကောင်တွေ ဟာ
မွတ်စ်လင်မ်မပြော နဲ့ လူတောင်မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကျနော်မှီငြမ်းသော မူရင်း Post
Aung Soe Lynn
ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာတွေနဲ့ ဒီနေ့တွေ့နေရတာတွေ့နဲ့ အတော်ကွာတယ်။
POW နဲ့ ပတ်သက်တာ IRFI ဝက်ဆိုဒ်က.
War Ethics in Islam : Prisoners of War မှာ တွေ့ လို့ မှားများ မှားနေလားလို့
This entry was posted on February 4, 2015 at 1:49 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.